Nzọụkwụ 3! Nweta onye aghụghọ n ’aghụghọ site na Naghachi ederede ehichapụ
Nzọụkwụ 3! Enwetaghị Nghọta Onye aghụghọ site na Naghachi ederede ehichapụ
Nsogbu nke ekwesịghị ntụkwasị obi
Etu esi ejide di ma obu nwunye?
Nzọputa 1 Kpọrọ ihe akaebe
Nyocha 2 Ntugharị Ntugharị
Kwupụta 3 Okwu na Atụmatụ maka Atụghị Anya
Ekwesịghị ntụkwasị obi na-a suụ ara. Ọ dịghị ihe ọ bụla ga-ewute gị karịa ka onye ị hụrụ n'anya ghọgburu.
Agbanyeghị, ọnọdụ na-agbanwe.
Na izipu ozi (dika WhatsApp, Messenger, Line, Viber, wdg), ntanetị na ntanetị, na saịtị mkpakọrịta nwoke na nwanyị, ọ ka mma ịre aghụghọ na onye hụrụ n'anya karịa n'oge ọ bụla n'afọ ndị na-adịbeghị anya.
Nke a bụ ikpe gbasara ịchọ enyemaka na Quora:
“Ekwesịrị m ịsị, agbasiri m onye m hụrụ n'anya site na WhatsApp na onye ọ zutere na-arụ ọrụ aghụghọ. Ya na mụ nọrọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 3ye. Ugbu a, amaara m ịkụ ya ụkwụ. Otu o sila dị, obi m ka ghere oghe nye ya… Adị m afọ ole na ole toro ya, mana echere m na mụ na ya ga eto eto n'ime mmekọrịta anyị nwere. .Ma na enwere m mmerụ ahụ, na-agbagwoju anya, na-ewe iwe, na-amaghị ihe m ga-eme onwe m, anaghị m achọ onye ọzọ ọhụụ n'ihi na m tụkwasịrị ya obi na ntụkwasị obi siri ike inye onye ọhụụ… M na-emeghe echiche onye ọ bụla . ; (“
N'ezie, ọ bụghị ikpe gbasara mmadụ.
Ma e nwere ụfọdụ eziokwu ị nwere ike ịchọ ịma gbasara ekwesịghị ntụkwasị obi.
Karịrị 60% nke ihe bidoro nọ ọrụ. (Isi mmalite: Lekwasị anya n’ezinụlọ). na 36% ndị mmadụ kwenyere na ha nwere nsogbu na a njem azụmahịa.
Banyere 20% -25% nke ndị mmadụ na United States mgbe ghọgburu mgbe di na nwunye. Ihe ọmụmụ Mahadum Indiana na-egosi na ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na-aghọ aghụghọ n'otu ọnụego. Ma tọ kọwaara ekwesịghị ntụkwasị obi n'etiti ụmụ nwanyị mụbara site na 40% n'ime afọ iri gara aga nke 5.
Mmekari mmetụta uche bụ ihe a na-ahụkarị karịa ihe anụ ahụ. Dabere na nyocha sitere na American Association of Marriage and Family Therapy, banyere 45% nke mmadụ na 35% n'ime ụmụ nwanyị enwetụla mmekọrịta nwoke na nwanyị, ebe 20% ndị mmadụ kwenyere na ha nwere anụ ahụ.
54% nke Nwoke na 70% nke Ndi nwanyi amaghi banyere mmezu oke nke di ha.
Onu ogugu nke umu nwoke / umu nwanyi kwenyere na ekwenyeghi n’agha na a nwanne di ma ọ bụ nwunye nwanne is 17% na pasent ya na a net pal is 18%.
More ozi banyere ekwesịghị ntụkwasị obi.
Ndị hụrụ ha n'anya na-achọsi ike na a hụrụ ha n'anya, ma mgbe ụfọdụ, ha na-agafe oke. Ewoo!
Enwere m olile anya na ị ga - enwe ihu ọma na - enweghị nsogbu ndị a ekwesịghị ntụkwasị obi, mana mgbe ụfọdụ, ọ bụ naanị ihe mere gị ka ị ga - aghọta ọnụọgụ ike siri ike.
Na nkenke, ịkwesịrị ịkwadebe ma mara ihe ị ga-eme, ọ bụrụ na.
“Ugbu a, e nwere ụzọ atọ m chere na ekwesịghị ntụkwasị obi na-ewute taa dị iche. Anyị nwere ezigbo ihunanya nke anyị na-echigharịkwuru otu onye iji mejupụta ọtụtụ mkpa: ịbụ ezigbo onye hụrụ m n'anya, ezigbo enyi m, nne na nna kachasị mma, onye m tụkwasịrị obi, onye ibe m nwere mmụọ, onye nwere ọgụgụ isi. Ma abụ m ya: A họpụtara m, apụrụ m iche, enwere m oke mkpa, enweghị m ike ịgbanwe agbanwe, m bụ onye. Na ekwesịghị ntụkwasị obi na-agwa m na ọ bụghị m. Ọ bụ nkwanye ùgwù kasịnụ. Iguzosi ike n'ihe na-emebi oké ọchịchọ nke ịhụnanya. Ma ọ bụrụ na n'akụkọ ihe mere eme nile, ekwesịghị ntụkwasị obi na-abụkarị ihe na-egbu mgbu, taa ọ na-abụkarị ihe na-agbawa obi, n'ihi na ọ na-eyi echiche anyị nke onwe anyị egwu. ”- Site Na ESTHER PEREL
Yabụ. Otu esi eme ihe ndị a gbasara? Etu esi ejide onye aghụghọ na-aatingụ?
Nke a bụ akụkọ gbasara Nancy, onye lụrụ nwanyị, ụmụaka abụọ.
Otu ụbọchị Eric di ya lọtara site na njem azụmahịa, Nancy nọ na-egwuri egwu na iPhone 8 ọhụrụ ya mgbe Eric na-asa ahụ mgbe ọ hụrụ ozi WhatsApp pụtara na enyo ahụ: “Achọrọ m ka ị chee gị n'ime m…”O chere ihu. Ma ozi ọzọ: ” Ọ dị m ka pere mpe mgbe ị kechiri aka gị gburugburu m… ọ na-efunahụ m nke ukwuu”Otu ihe ọjọọ mere, Nancy ghọtara ma nwee mmetụta na ihe niile na ndụ ya niile na-ada. Kama ịpụ apụ, ọ tụpụrụ iPhone ma mee ka ọ na-ehi ụra mgbe o mịrị ume miri nke obere oge. Ọ bụ ogologo abalị.
Ọ na-aghọ aghụghọ? Kedu mgbe ọ mere? Ogologo oge ole ka ọ na-adị? Onye ka ọ bụ? Ọ nwere onye na-arụ ọrụ? Ma ọ bụ naanị otu abalị guzo? O bu ihe nkenke nwoke, ego oruru ego, ebe a na-akparịta ụka, ịhịa aka n'ahụ na njedebe zuru oke? Ọ mara mma karịa? Ma ọ bụ ikekwe dị nnọọ obere…
Iwe were ya nke ukwuu.
Nancy chọrọ ịmata ihe niile banyere ya tupu ya alụọ di ya na-ekwesịghị ntụkwasị obi.
O kpebiri inyocha ekwentị Eric na-esote ụbọchị, mana ọ chọpụtara na a na-ehichapụ ndekọ oku na ozi niile ụbọchị ise gara aga. O siiri ike.
Gịnị ka ị ga-eme ma ọ bụrụ na ị bụ Nancy?
Nke a bụ ihe ị ga - eme iji nwude Cheater
Chegodi obere oge gbasara etu onye aghụghọ ma ọ bụ di nwere ike isi gọnarị ebubo gị (dịka ọ bụghị ihe ọ dị ka ya! Ọ bụ nghọtahie, wdg), na ịnakọtaghị ihe akaebe ịchọrọ ịgbagha ihe o kwuru.
Ndi mmadu hapuru n’onye ha nwere ikike ima ihe na eme. Ọbụlagodi, ọ ga - enyere aka ịme mkpebi gị ka ị lebara nsogbu ahụ anya ma wepu obi abụọ n'uche gị.
Yabụ, ebe a bụ ndụmọdụ ole na ole bara uru maka akwụkwọ gị.
Ntinye aka 1. Chụ nta maka ihe ndị a na-eme kwa ụbọchị
Ebe ọ bụ na di ma ọ bụ nwunye aghụghọ na-eme ka ọ gbanwee akụkọ ya, ma ọ bụ na-agbagha ikike gị, yabụ ide akwụkwọ akụkọ na ịnakọta ego bụ ụzọ kachasị mfe ma dị irè iji dekọ ihe niile na ndụ gị kwa ụbọchị.
Detuo akwụkwọ iji dekọ ihe niile nke onye gị na ya na-eme, dị ka mgbe na ebe aga-aga? Ọ nwere ndị ọzọ ọ metụtara? Kedu ihe ngọpụ nyere? wdg
Mgbe ahụ, nakọta ụgwọ niile, nnata, ndọrọ ego ATM, nkwupụta kaadị akwụmụgwọ, wdg si na nwunye gị ma jiri aka gị tụnyere ihe ekwuru ma dekọba n'akwụkwọ gị.
Ntinye aka 2. Nweta Cheater na mberede
Kwadebe nleta ị na-atụghị anya ịrụ ọrụ, ma ọ bụ lọta n'oge n'oge a na-atụghị anya ya, ma ọ bụ mee ọkwa banyere ị ga-arụ ọrụ n'oge, ma mechaa laa n'ụlọ n'isi, wdg.
Ntinye aka 3. Nnyocha
Fọdụ n’ime gị nwere ike i were ndị ọrụ nyocha ọrụ nzuzo ma ọ bụ jiri ngwa nledo nyochaa ekwentị nwunye gị.
Dị ka Ọkpụkpụ, nke bụ ngwaọrụ ekwentị kachasị elu ndị mmadụ ji eme ihe soro ihe omume mmadụ na iPhone / gam akporo ma ọ bụ mbadamba, dika oku mbata ekwentị. Ozi WhatsApp, Facebook, SMS, GPS, wdg na ezigbo oge.
Cheta na: N’ikwu eziokwu, ndụmọdụ ndị ae kwuru n’elu na-arụ ọrụ. Mana. Ebe ọ bụ na ndị di gị ma ọ bụ nwunye gị na-emetụla achọpụtala na ị nwetara mmetụta nke ụzọ mgbapụ ha, ha ga-eme ka ọ bụrụ ihe siri ike ma sie ike ịchọpụta.
Ọ ga-ewe ọtụtụ ụbọchị ọ bụrụ ọnwa iji chịkọta ozi niile ịchọrọ.
Ntinye aka 4. Nhọrọ obere oge: Naghachi ozi ederede ehichapụ na ekwentị mkpanaaka Cheating
N’oge ugbu a, anyị niile riri ekwentị anyị ihe niile ụbọchị niile. Data ekwentị, karịsịa ederede ederede, nwere ihe nzuzo niile ị nwere.
Ọ bụrụ na ị hụtụrụla mgbe ihe a mere " Akụkọ banyere Gị dum"Si Black Mirror, ị gaghị eju gị anya na ndị di na nwunye gị na-aghọ aghụghọ ga-ehichapụ ihe ọ bụla a na-ewere dị ka ihe akaebe nke ụzọ mgbapụ ha (dịka, ozi, ịkpọ oku, kọntaktị, wdg), mgbe ha maara ihe.
(Nseta site na ihe nkiri Black Mirror 3: Ihe Mere Gị dum, nke jedebere na ihe nkiri na-enye nsogbu banyere nwanyị na-aghọ aghụghọ.)
Agbanyeghị, ị nwere ike iwepu ya.
Data mgbake site na iPhone na gam akporo ekwentị dị oke mfe n'oge a ma ọ bụrụ na ị họrọ ngwaọrụ ndị ziri ezi.
You nwere ike ịchọta ngwanrọ mgbake data site na iwepu “iPhone data mgbake”, “iOS data mgbake” ma ọ bụ “mgbake data gam akporo”.
Kedu ihe ọzọ, ọ bụrụ na ịnweghị oge zuru oke iji nwalee ngwanrọ a niile (ebe ọ bụ na ha niile abụghị ndị a pụrụ ịtụkwasị obi), ebe a bụ nhọrọ nhọrọ abụọ nke ngwanrọ mgbake data:
Ntụle Software Software kachasị mma iPhone Win na Mac / 2019
Kachasị mma (Top 5) Software Data Recovery nke Windows na Nyocha Windows / Mac.
Họrọ otu n'ime sọftụwia mgbake data akachasị akwadoro. Ọmụmaatụ, Fonelab maka iOS Or Fonelab maka gam akporo a na-anakwere dị ka ndị kachasị arụ ọrụ ma nwee ọnụego mgbake iPhone / android kachasị elu n'ahịa.
Lee usoro 3 maka ị weghachite ederede ederede ehichapụ / ịkpọ ndekọ na mkpanaka di na nwunye na-aghọ aghụghọ.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ ekwentị gị na - agagharị na kọmputa.
Mwepụta iOS Data Iweghachite/ Iweghachite Data Weghaara. Jiri eriri USB were eriri USB jikọọ komputa di na iOS / gam akporo. Pịa na “data mgbake”. Enweghị paswọọdụ dị mkpa.
Nzọụkwụ 2. Nyochaa ekwentị di na nwunye gị iji weghachite data ehichapụ na ya.
Pịa “Malite ianomi” ka usoro ihe omume i scanomi ngwaọrụ. Usoro ahụ ga-akwụsị sekọnd ole na ole na nkeji ole na ole, dabere na ọnụọgụ data dị na ngwaọrụ ahụ. Akwụpụla ekwentị ahụ mgbe a na-enyocha ya.
Nzọụkwụ 3. Hụchalụ data nyochachara wee gosipụta ụdị aghụghọ dị iche iche.
The scanned data site usoro ihe omume na-agụnye ehichapụ na ẹdude data, dị ka ozi, foto & vidiyo, kọntaktị, oku na-aga akụkọ ihe mere eme, WhatsApp, ozi, Viber, Kik, wdg Naanị otu click na "Naghachi" button. Pụrụ nanị ịchọta ozi, na foto gbanwere na ọchịchọ gosiri na ọrụ interface.
Zụta iPhone Data Iweghachite Ugbu a!
Naghachi ehichapụ iPhone Ozi, Kpọọ dekọọ, Ndi ana-akpo, WhatsApp, wdg.
Zụta maka Win Zụta maka Mac
Zụta Ihe Nweta data gam akporo ugbu a!
Naghachi-ehichapụ ozi Android, Kpọọ dekọọ, Ndi ana-akpo, wdg.
Ruo ugbu a, ịnwere ụfọdụ nkọwa, ọkachasị, ederede na nọmba ekwentị nke ụlọ ezumike. Ọ bụ oge ịmara onye / ọ dị na ndụ n'ezie.
Ihe omuma nke inwetara site na iweghachite data nke di na nwunye di na nwunye banyere aghụghọ ma obu nyochaa na mSpy, i nwere ike ichota onye di gi ma obu nwunye gi na-eji.
3 Freeways iji tụgharịa nyocha na nọmba ekwentị
#1 Google ya.
Google bụ igwe nchọcha kachasị mma n'ụwa niile. O nwere ikike igwuputa ihe na uzo ojoo na intaneti kachasi nma nke intaneti. Gugul nọmba ekwentị, oge ụfọdụ ị nwere ike ị nweta akara kụrụ ozugbo. Kwesịrị igba egbe.
Nchọgharị #2 Facebook.
Site na ntinye akwụkwọ ntanetị nke akụkụ niile nke ndụ n'ezie, Facebook bụ ụzọ kachasị mma iji chọọ nhọta dabere na nọmba ekwentị. Naanị tinye akara ekwentị na igbe ọchụchọ dị na ntanetị Facebook gị. Ọ bụrụ na mmadụ nwere nọmba ekwentị ha jikọtara na profaịlụ Facebook ha, aha ha ga - apụta dị ka nsonaazụ ọchụchọ kachasị, n'agbanyeghị ntọala nzuzo ha niile na ọ bụrụgodị na ị bụghị enyi.
#3 nyocha nchọta n'efu.
Weebụsaịtị juputara na nyocha ekwentị efu dị ka, dịka peoplefinders.com, zlookup.com, na spydialer.com, wdg. Iji websaịtị ndị ị na-eme nyocha, wee nwee ike ịchọpụta adreesị, aha, nọmba ekwentị ma ọ bụ email.
N'oge a, i tiwarala ihe nzuzo di gị ma ọ bụ nwunye gị debere kemgbe. Ikekwe ịchọrọ oge iji wetuo obi, ma chọpụta etu ị ga-esi merie ọgbaghara a dị egwu.
Kwuo okwu ma mee atụmatụ maka atụghị anya ya
Gwa onye gị na ya na-emekọ ihe.
Ọ bụ ezighi ezi, mana ọ dị ka ụzọ naanị ị ga - esi wepu nsogbu obi na - egbu mmụọ site n'ịgwa ya na onye ị hụrụ n'anya.
Mara ihe ọ na-eche, na ihe bụ nhọrọ ha. May nwere ike ịdị na-atụ anya nkwupụta ma ọ bụ ọgụ, mana i kwesịrị inwe ezi uche na ndidi. Niile ị nwetara bụ mmụta nke ndụ, ụgwọ ọrụ maka ntozu oke nke ọgụgụ isi gị.
M ga-agbaghara ya / ya?
Ọfọn, ekwela ka ndị enyi gị, ndị ezinụlọ gị, na nsonaazụ ị na-achọ na Google kpebie gị. Soro obi gi mee mkpebi nke aka gi.
Echegbula onwe gị banyere ihe ndị gara aga. Tụkwasara m obi, ọ gaghị adị mma ịkọ banyere oge adịghị anya.
Me atụmatụ kachasị njọ.
ịgba alụkwaghịm. Y’oburu na unu abuo ruo n’oge a, ihe nwute, ị kwesiri ịma etu esi echebe onwe gi gosi akwụghị akwụ n'ụlọ ikpe maka ịgba alụkwaghịm.
ọbọ. Eeh. I nwere ike jupụta n'ịkpọasị na oke iwe. Na ịkpọasị na-akpata ịbọ ọ́bọ̀. Ma ị kwesịrị iji ike ime a mee ihe n'ụzọ amamihe. I kwesiri iburu n'uche mgbe nile na ihe kachasi nma bu imegwara onwe gi.
Otu esi ejide Facebook Cheater
Onye bu di m Oderede Ihe?
Ọ bụ ihe nhụsianya ịbụ onye ọ hụrụ gị n'anya. Ma ịbụ onye ọbọgwụ abụghị ihe amamihe dị na ya. Iji gosiputa ekwesighi iko ya, I nwere ike idekọ ihe na-enyo enyo nke ọ bụla nke onye aghụghọ ma ọlị site na idebe akwụkwọ akụkọ, jiri ngwa nyochara ekwentị ya ma ọ bụ nwetaghachi ozi ehichapụ na ekwentị. Chikọtakwa onwe gị ọnụ, zute di ma ọ bụ nwunye gị aghụghọ ma mee atụmatụ maka nke kacha njọ. You nwere ike ịme ya.
N'ikpeazụ, lee vidiyo Ted nke dabara adaba maka ọnọdụ uche gị na-agwa gị.
Ichegharia omume ekwesịghị ntụkwasị obi… okwu maka onye ọ bụla hụtụrụla | Esther-eze
Enwere m olileanya na ị nwere ọ readingụ ịgụ akwụkwọ a.
*More ozi banyere ekwesịghị ntụkwasị obi.